Induction Chemical Reactors များသည် Process Vessels, Storage, Tanks များအတွက်အပူပေးသည်
ပင်မစာမျက်နှာ / applications ကို / induction အပူဓာတ်ပေါင်းဖို / ဓာတုဓာတ်ပေါင်းဖိုအပူ
အမျိုးအစား: induction အပူဓာတ်ပေါင်းဖို Tags: ဓာတုဓာတ်ပေါင်းဖိုအပူ, Dual Fuel အပူရေယာဉ်များ, induction ဓာတုဓာတ်ပေါင်းဖိုအပူပေးစက်, induction ဓာတုရေယာဉ်များအပူ, အပူဓာတုဓာတ်ပေါင်းဖို induction အပူ, induction အပူလဲလှယ်, induction သိုလှောင်အပူ, ဖိအားရေယာဉ်များအပူ, Processor ရေယာဉ်များအပူ, Tanks အပူအခြေချ, အပူပေးစက်, ငွေ့အပူ, ရေယာဉ်များအပူ
Induction Chemical Reactors အပူ - ဓာတုရေယာဉ်များအပူ
induction ဓာတုဓာတ်ပေါင်းဖိုအပူ ဓာတ်ပေါင်းဖိုများ၊ လုပ်ငန်းရေယာဉ်များ၊ သိုလှောင်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားသည့်တင့်ကားများ၊ ဗတ်၊ ဗက်စ်တိုင်များ၊ ဖိအားပေးရေယာဉ်များ၊ ရေငုပ်သင်္ဘောများနှင့်အပူပေးစက်များ၊ အပူလဲလှယ်သူများ၊ အလှည့်ကျသည့်ဗုံများ၊ မည်သည့်အရည်အပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက်ရရှိနိုင်နည်းလမ်း။
1KW ~ 500KW မှ induction heat machine ရှိသည်။ အပူချိန်0～ 650 C. ကျွန်ုပ်တို့သည်အမျိုးမျိုးသောဓါတ်ပေါင်းဖိုများအတွက်သင့်လျော်သော induction heating machine ကိုပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
reacor အပူများအတွက် induction အပူ၏အားသာချက်:
2. သော induction ကွိုင်နှင့်အပူသင်္ဘောနံရံအကြားမည်သည့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်မှမရှိ
၃။ လက်ငင်းစတင်ခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်း၊ အဘယ်သူမျှမအပူ inertia
၆။ မြင့်မားသောစွမ်းအင်ထည့်သွင်းမှု၊ အလိုအလျောက်သို့မဟုတ်မိုက်ခရိုပရိုဆက်ဆာထိန်းချုပ်မှုအတွက်စံပြ
(၁၄) အပူပေးစက်သည်အနည်းဆုံးကြမ်းခင်းလိုအပ်ချက်နှင့်အတူပါ ၀ င်သည်
၁၅။ ၂၄ နာရီအလုပ်လုပ်ပြီးလုံခြုံစိတ်ချရပြီး ၁၀ နှစ်ကျော်အလုပ်လုပ်သည်
induction အပူကွိုင်ဒီဇိုင်းများ သတ္တုရေယာဉ်နှင့်စင်တာမီတာအနည်းငယ်မှအချင်းမီတာနှင့်အရှည်အထိအမျိုးမျိုးသောပုံစံများနှင့်ပုံစံများရှိသတ္တုရေယာဉ်များနှင့်တင့်ကားများနှင့်ကိုက်ညီရန်ရရှိနိုင်သည်။ နူးညံ့သောသံမဏိ၊ ၀ တ်ထားသောပျော့ပျောင်းသောသံမဏိ၊ အစိုင်အခဲသံမဏိသို့မဟုတ်သံထည်မဟုတ်သောအိုးများကိုအောင်မြင်စွာအပူပေးနိုင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အနည်းဆုံးနံရံအထူ ၆ မှ ၁၀ မီလီမီတာကိုအကြံပြုသည်။
အဆိုပါ induction ဂဟေ preheating စက် ပါဝင်:
1. induction အပူပါဝါ။
2. သော induction အပူကွိုင်။
၃။ cable တိုးချဲ့ပါ
induction အပူသည်အခြားစနစ်များတွင်မတွေ့ရသောအကျိုးကျေးဇူးများ - စက်ရုံထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ခြင်းနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်သို့သိသိသာသာအပူထုတ်လွှတ်မှုမရှိခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောလည်ပတ်မှုအခြေအနေများဖြစ်သည်။
HLQ သော Induction Chemical Bessels Heating System ထုတ်လုပ်သူ
ကျွန်ုပ်တို့တွင်အနှစ် ၂၀ ကျော်အတွေ့အကြုံရှိသည် သော induction အပူ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိနိုင်ငံများစွာသို့ရေယာဉ်များနှင့်ပိုက်အပူပေးစနစ်များကိုတီထွင်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ တပ်ဆင်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အပူပေးစနစ်သည်သဘာဝရိုးရှင်းပြီးအလွန်စိတ်ချရသောကြောင့် induction ဖြင့်အပူပေးသည့်စနစ်ကို ဦး စားပေးရွေးချယ်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်သင့်သည်။ induction အပူသည်လျှပ်စစ်နှင့်သက်ဆိုင်သောအဆင်ပြေမှုများအားလုံးကိုတိုက်ရိုက်လုပ်ငန်းစဉ်သို့တိုက်ရိုက်ယူပြီးလိုအပ်သည့်နေရာတွင်အပူအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးသည်။ ၎င်းသည်အပူအရင်းအမြစ်လိုအပ်နေသောမည်သည့်ရေယာဉ် (သို့) ပိုက်စနစ်တွင်မဆိုအောင်မြင်စွာအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
တစ်ခုချင်းစီအဖြစ် induction အပူသင်္ဘော ဖောက်သည်တစ် ဦး ချင်းစီ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်လိုအပ်ချက်များအတွက်သီးသန့်စီစဉ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားနှင့်အပူပေးနှုန်းများကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အင်ဂျင်နီယာများသည်ထုံးတမ်းစဉ်လာတည်ဆောက်မှုအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာရှိခဲ့ပြီ သော induction အပူစနစ်များ စက်မှုလုပ်ငန်းကျယ်ပြန့်အတွက် applications များကျယ်ပြန့်သည်။ အပူပေးစက်များသည်လုပ်ငန်းစဉ်၏တိကျသောလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းခွင်၌ဖြစ်စေ၊ လုပ်ငန်းခွင်၌ဖြစ်စေဖြစ်စေရေယာဉ်ပေါ်တွင်လျင်မြန်စွာတပ်ဆင်ရန်တည်ဆောက်ထားသည်။